PINK ORCHID, OO AY KU JIRAAN SHAROOTO CAD: WAA MAXAY WAXA UU YAHAY DHIRTA U EG MID SAWIR LEH, NOOCA SHAKHSI AHAANEED EE SHAKHSI AHAANEED MA U BAAHAN YAHAY HADDII UU KU KORAY DHERIGA? - SOOSAARKA DALAGGA
Marka la barbardhigo noocyada kale ee orchids, orchid casaan ma aha warshad aad u jilicsan. Oo weliba, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sifooyinka daryeelka ee isaga. Ubax yaryar oo casaan leh ayaa qurxin doona windowsill kasta.
Noockan orchid wuxuu u baahan yahay waraabin gaar ah, qoyaan badan iyo xaaladaha heerkulka oo deggan. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in dhirta loo isticmaalo jawiga noocan oo kale ah. Markaas waxaad ku baran doontaa faahfaahin dheeraad ah nooca ubaxa ah, waxa muuqaalkiisu yahay sawirka iyo sida loo daryeelo dhirta haddii ay ku koraan guriga dheriga.
Magaca cilmiga: Phalaenopsis Rosea. Origin: Filibiin iyo Taiwan, Borneo Peninsula.
Orchid casaanku waa hadiyadda ugu wanaagsan ee kuwa jecel, sababtoo ah midab casaan ah ayaa si joogto ah u muujinaysa dareenka ugu khafiifsan. Ubaxu wuxuu kuu sheegi doonaa dhammaantiin.
Qeexida muuqaalka iyo sawirada
Muuqaalka ugu muhiimsan ee orchid waa ubaxa ubaxa casaanka ah.sida dhirta quruxda badan. Noocyadaasi waa mid yar oo leh caleemo qoyan. Dhererkoodu wuxuu gaaraa 15 cm, width - 8 cm Caleemaha waa cagaar mugdi ah, inkastoo marmarka qaarkood ay jirto jilbaha cas ee dhinaca dambe.
Meelo qurux badan oo qurux badan oo madow oo madow, oo dhererkeedu yahay 25-30 cm. Ilaa 15 ubax oo casaan-cadaan ah ku dul qarin, kuna xidhan rosettes. Waxay si tartiib ah u kala soocaan hal mid oo waxay gaaraan 3 cm dhexroor.
Waa maxay noocyadan midabka leh?
Khamriga Phalaenopsis (Sacramento kala duwan) oo leh xannaaneynta saxda ah si joogto ahlaakiin 3 bilood sanadkiiba wuxuu leeyahay nasasho. Kala duwanaanta Schiller ayaa ku baxda cimilada kulaylaha, waxay leedahay caleemo adag oo adag. Duufaanku wuxuu gaaraa 1.5 mitir waxana uu hayaa 200 oo ubax dhexdhexaad ah (7 cm dhexroor). Waxay yihiin casaan gaboobay. Iskudheellida orchid orkutkan casaanka ah ee Janaayo oo ka tagta ubax ugu dambeyn kaliya ee May.
Sheekada sida quruxda quruxda badan u guulaysatay Yurub waa mid aan caadi ahayn. Sanadkii 1731, baaritaanka orkuska qalalan ayaa waxaa laga soo diray Bahamas by Botanist British ah.
"Yaa garanaya," Professor ayaa yiri, "laakiin hadday dhacdo in ay weli ku nool yihiin tuubo?" Waxa uu ku beeray dhirta daaq ubax oo kaliya, kaddibna wuxuu keenay nolosha. Muddo ka dib, ubaxyo casaan ah oo qurux badan ayaa muuqday. Marka, markii ugu horreysey ee UK, Orchid kuleyl ah ayaa ubaxday.
Wixii orchid casaan, waa inaad siisaa xaalado gaar ah nolosha. Heerkulka ugu fiican wuxuu noqon doonaa 20 ° C jiilaalka iyo illaa 35 ° C xagaaga. Xilliga qaboobaha, hoos u dhig heerkulka habeenkii ilaa 10 ° C waxay dhaawici kartaa ubaxa.
Wixii orchids, daaqadaha leh jihada bari ama galbeed ayaa ku habboon. On gaar ahaan maalmaha qoraxda kulul, orchids waxay u baahan tahay shalo. Iftiinka iftiinka wuxuu ku siinayaa midabyo midab leh, laakiin xaaladaha soo noqnoqda waxay keenaan gubasho.
Xilliga jiilaalka, ubaxa wuxuu u baahan yahay nalalka dheeriga ah ee foornada fiidkii.maadaama uu ubaahan yahay saacad 12 saac ah si uu u koro.
Waraabinta orchids casaan waa mid dhexdhexaad ah. Xilliga xagaaga, ciidda ayaa qoyan, maadaama ay qallajiso dhowr jeer toddobaadkii, cimilada qabow waxaa la yareeyaa dhowr jeer bishii. Xididdada dhirta ayaa si gaar ah u furan. Qaadashada, sida qoyaanka xad dhaafka ah, waxay keenaysaa in ay baabbi'iyaan.
Biyaha waxaa loo isticmaalaa heerkulka qolka.. Waa in la hubiyaa in ciidda oo dhan lagu qooyay dareeraha. Si taas loo sameeyo, waxaad dhejin kartaa baaldi biyo, ka dibna u daadi.
Si kor loogu qaado qoyaanka dhererka, ku dhaji tareenka qaansooyinka, ka buuxi biyo.
Orchid Pink waxay u baahan tahay bacrimin leh dhisme orchid gaar ah. Ku dar kaliya substrate qoyan si aan loo gubin xididada xasaasiga ah. Nidaamka waxaa la sameeyaa hal mar labadii toddobaadba mar inta lagu jiro xilliga koritaanka firfircoon. Bacriminta xad dhaafka ah waxay keenaysaa dildilaaca caleen iyo maqnaansho dheer oo ubax ah. Marka aad dooranaysid Bacriminta waa inaad taxaddar siisaa kuwa ku jira qaddarka ugu yar ee nitrogen.
Qalab ku beddelasho
Wixii orchids casaan waa aster ku habboon, oo ka kooban jilif garbaha, jarada dhuxusha iyo dhuxusha.
Wixii beerto waxay ka fiican tahay in la isticmaalo dhir xirmooyinka caag ah. Xaaladdan, waxaad kormeeri kartaa gobolka nidaamka xididka si looga hortago geerida geedka waqtiga la joogo iyo in la kormeero baahida loo qabo fuuq-celinta.
Ku celcelin ubaxa xaaladaha ba'an aan ka badneyn hal mar dhowr sanooyin kasta.. Haddii xididada ay ku badan yihiin dheriga, iyo dhirta ayaa hoos u dhigtay koritaanka, waxaa habboon in la beddelo mid ka weyn. Orchids transplant oo kaliya kadib ubax.
Qeybta hoose ee dheriga ayaa la dhigay lakabka ah dheecaan, xididdada la qalajiyey ayaa la gooyaa oo laga nadiifiyaa ciidda hore. Warshadda waxaa lagu dhejiyaa dher cusub oo si tartiib ah loogu daboolay substrate, iyada oo aan cadaadin, si aanay u dhaawacin xididka jilicsan. Peduncle waxay u muuqataa qurux badan, waxa kor loo qaadaa. Si arrintan loo sameeyo, waa inaad xirtaa taageerada si taxadar leh loo geliyo dhulka, iyagoo daryeelaya inayan waxyeeleynin xididada.
Marka xigta, muuqaal muuqaal ah oo ku saabsan ku-beddelidda orchid:
Dhirta orchid waxay dhacdaa carruurta, koraya ubax. Intaa waxaa dheer, in waqtiga transplanting, dhirta gabadha ayaa kala go'ay. Inflorescences cusub ayaa soo muuqda illaa hal sano.
Iyada oo daryeel ku haboon loogu talagalay orchid, dhirta dhif ayaa jiranaysa waxayna ku dhowdahay cayayaanka.
Dhibaatada ugu weyn ee orchid waa xididdada. Kala saaridda aagagga ay saameeyeen iyo beddelaadda ciidda waxay caawisaa. Waraabinta ayaa yareysa muddada raysashada.
Orchids ayaa saameeyn kara caarada guduudan iyo caarada cas, taas oo ka gudbi karta geed bukaanka ku dhow. Marka aad iibsaneyso ubax, fiiri caleemaha iyo ubaxyada, maxaa yeelay waxaa lagu arki karaa in lagu jabsaday dixir aan caadi ahayn.
Waxaanu soo bandhignaa daawashada fiidiyowga ku saabsan cudurada orchid:
Orchid casaan waa mid ku habboon dadka curadnimada leh.. Iskudhicitaankiisa cajiibka ah, xuruufta ubaxa waxay awood u yeelan kartaa in uu kiciyo waxyaabihii xitaa "farsamoyaqaan" oo ka dhigi kara abuur yar.
Intaa waxaa dheer, dhirta si toos ah waxay siisaa fursado fiican ee geedi socodka hal-abuurka: aad jeceshahay in aad sawirto - aad aad ugu farxi lahayd in aad sawirto ubax, aad jeceshahay sawir - xulashada asalka, xagasha iyo nalalka rakibidda waxay qaadan doontaa dhowr saacadood.
Haddii laguu soo bandhigo orchid, waa inaadan ka baqin in guriga uu ku dhimanayo ama joojin doono ubaxyada. Iyada oo ay ku haboon tahay xaalad kasta, ubaxyada orchid casaan ayaa noqda sabab u ah kibir.